Osisi ego di omimi nke kachasi ngwa ngwa na 2021. Ego di iche iche nke kachasi ike, ego di iche iche di iche iche di na ahia di elu.
Ego di iche iche nke nwere ego
Ọganihu percent maka otu izu
Livepeer (LPT) 35.61 %
Proton (XPR) 16.81 %
Nervos Network (CKB) 13.52 %
Polymath (POLY) 13.41 %
Ankr (ANKR) 13.39 %
WOO Network (WOO) 13.02 %
Verasity (VRA) 8.49 %
Hive (HIVE) 7.31 %
ICON (ICX) 6.96 %
IoTeX (IOTX) 5.28 %
Ngwa ngwa ngwa na-etolite ego ego bụ ebe nrụọrụ weebụ cryptoratesxe.com, nke na-egosi elu ego ego na mmụba ọnụego ngwa ngwa n'izu gara aga.
Ọrụ ntanetị '' ngwa ngwa ngwa ngwa ego ego 'na-eji ụzọ mepere emepe nke mgbanwe site na mgbanwe ego ego ma mepụta ọkwa nke ngwa ngwa ngwa ngwa ego ego ozugbo.
Ihe a na-etolite ngwa ngwa bụ crypto, dị ka nkọwa anyị si dị, nke n’ime izu na-egosi uto kachasị na uru, uto nke ọnụego ya. A naghị atụle mgbanwe dị na ọnụahịa ahụ abụghị nke anyị, ọ bụ naanị mgbanwe nke uru karịa ihe a na-eme kwa izu na-eburu n'uche. Curdị ego ego dị otú a, dị ka a na-achị, na-egosi uru kachasị elu, mana ọbụghị akwụsi ike mgbe niile. Ihe ọghọm nke itinye ego na-etolite ngwa ngwa kachasị, mana nloghachi kachasị na oge ọ bụla.
Ego ngwa ngwa ego ego kacha mma maka nkenke, egosighi ike.
N'adịghị ka ọrụ "", nke na-egosi mmụba ọnụego kachasị n'izu, Ngwa ngwa na-eto eto ego di iche iche ọrụ, na ntụle, gosipụtara crypto site na obere tozuru oke na nkwa dị nta na obere volatility.
A na-akọghachi ọkwa nke ego ego ngwa ngwa n'ịntanetị, ebe a na-azụ ahịa mgbanwe ego ego mgbe niile, ọnụego ego ego na-agbanwe kwa mgbe.
Jiri ọrụ "ngwa ngwa ngwa ngwa crypto" na ntanetị na n'efu.
Kacha uru ego ego maka 2021 bụ ọrụ ntanetị weebụ anyị na-akwụghị ụgwọ nke na-egosi uru kachasị, n'echiche anyị, ego ego ị nwere ike nweta ngwa ngwa.
Anyị na-enyocha uru nke ego ego site na-agbanwe uru nke mkpụrụ ego ma ọ bụ ọnụego mgbanwe ya na mgbanwe. Anyị na-ewere ego crypto ego kachasị dị ka nke gosipụtara mgbanwe kachasị mma na uru ya karịa oge izu. N'echeghị nkwụsi ike nke ọnụego ya, anyị na-ele naanị ọdịiche dị na uru na mbido oge na njedebe nke ya.
Nlele nke ihe di iche na udu nke crypto bara uru gara aga n’ime ubochi asaa gara aga. Ọnụahịa na ike mgbanwe ọnụego mgbanwe ego ego na-agbanwe kwa ụbọchị na kwa elekere. Anyị dị elu "ogo uru ego ego" mba na-agbanwe.
Ego ngwa ngwa ego ego nke 2021.
Ego ego ego ngwa ngwa maka 2021 - anyị gosipụtara na ibe a. Ma ngwa-ngwa-ngwa-ngwa bu okwu nke putara ngwa-ngwa. Tụ ọnụego mgbanwe crypto maka 2021 dị ogologo oge. Ije ego ego ego nke kacha eto eto maka 2021 na-egosi ego na-eji ntule uto maka izu ahụ.
Nlepụta nke ego ego ngwa ngwa maka 2021 sitere na ntinye nke 10 cryptos n'usoro iji usoro toro eto rue ngwa ngwa ngwa ngwa, n'usoro nke nkpuru.
A na-akọwapụta ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa site na ọdịiche dị na mmalite nke ọmụmụ ihe na njedebe. Kedu ngbanwe na ọnụ ọnụ bụ mgbanwe na ọnụego mgbanwe crypto n'ụzọ a adịghị mkpa.
Anyị na-egosi ozi banyere mgbanwe na mkpụrụ nke ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ka pasent nke ọnụego uto.
A na-egosi ọkwa nke ngwa ngwa ego ego maka izu ikpeazụ nke 2021. Anyị anaghị ekwu eziokwu banyere ego ndị a na ọrụ a.
Jiri ọrụ nke ego ego kachasị elu na-etolite maka 2021 n'ịntanetị na n'efu.
Ndị kasị baa uru ego ego.
Ego ego ndị kasị baa uru bụ otu n'ime ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa.
Uru kachasị nke ego ego na-eme ka ndị na-etinye ego na-elebara anya na-akpata ọtụtụ ego na obere oge.
N’ezie, ihe ọghọm na-enweta oke ego bụ oke.
Itinye ego na crypto bara uru karie ka ekwesiri iji obi ya wee nyochaa ọnụego ahụ mgbe niile na ịghara ileghara ụzọ ọpụpụ si etinye ego.
Iwu nke mgbanwe mgbanwe crypto, yana mgbanwe ego, nwere nghọta, ma ọ bụrụ na ego ego na-enweta uru ngwa ngwa ma gosipụta ezigbo ego, mgbe ahụ ọ nwekwara ike ida uru ngwa ngwa.
Ọ bụ ego ego a anyị gosipụtara na ọrụ a nke saịtị anyị.
Ego ego na oke uto.
A na-ekpebi Ego ego na uto kachasị - na oge ụfọdụ. Na ọrụ mkpokọta ọkwa ego nke ego ego dị n'ịntanetị nke ntanetị nke uto, anyị ahọpụtara oge izu.
Oke uto nke crypto kwa izu, dị ka anyị si hụ ya, na-egosi omume nke ọnụego mgbanwe ego ego yana o kwere omume. N'oge a, a na-eme ka obere ngwa ahịa niile dị na ya ma na-agbanyeghị na mgbanwe mgbanwe kwa ụbọchị na ọnụego mgbanwe ahụ.
Mmụba kachasị nke crypto na ọrụ anyị bụ akara ngosi dị n'etiti itinye ego ogologo oge na ndị na-ere ahịa na-agbanwe egwuregwu kwa ụbọchị.
A na-ahụkwa Crypto na oke ito eto na ọrụ ndị ọzọ na saịtị anyị.
Tebụl nke ego ego kachasị baa uru ma na-eto ngwa ngwa.
Tebụl nke ego ego nke kachasị baa uru ma na-eto ngwa ngwa - jiri anya na-egosipụta ogo anyị dị elu nke crypto.
Na tebụl nke ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ị ga-ahụ aha ego nke crypto na ngbanwe nke ọnụego ya na pasent.
Mgbe ịpịrị n’otu n’ime uru ego ego dị na tebụl, ị ga-edugharị gaa na peeji maka ozi zuru ezu na ọnụego mgbanwe nke mkpụrụ ego a.
Chart nke kacha baa uru ma na-eto ngwa ngwa ego ego.
Chaatị nke ego ego nke kachasị baa uru na ngwa ngwa bụ ngwa ọrụ ọzọ dị n'ịntanetị nke na-egosipụta ọkwa dị elu nke ego ego kachasị.
Chaatị nke ego ego ngwa ngwa na-egosipụta ike nke ọnụego nke 10 cryptos kachasị elu na nlọghachi azụmaahịa kachasị elu dịka atụmatụ anyị si dị.